Thursday, 21 June 2012 16:05	नागरिक
गाउँले बलदेव- तपाईं अरू जे हुनुपर्छ, हुनुहोस् तर घर न थरको चाहिँ कहिल्यै नहुनुहोस्। दार्जिलिङेहरू पुर्ख्यौली थलो गोर्खाप्रति गौरव गर्दै आफूलाई गोर्खाली भन्न चाहन्छन्। गोर्खा नेपाली इतिहासमा वीरता तथा एकताको जननी भूमि पनि हो। साहित्यकार केशवराज 'पिँडाली' 'पिँडा'मा जन्मिएका हुन् त राधेश्याम 'लेकाली' इलामको लेकमा। दामोदर नलाङी नलाङका हुन् भने घिमिरे मैदेली मैदीका।
Thursday, 14 June 2012 17:53	नागरिक
उमेर जति भए पनि हुन्छ। तर, स्वभाव राम्रो, केयरिङ हुनुपर्छ। काले काले हिसी परेको, कम बोल्ने तर फ्य्रांक केटाहरू केटीहरूको डिमान्डमा छन्। अनुहार, लवाइ, बोल्ने शैली र उचाइ- यी चार इलिमेन्ट्स भए पुग्छ। अफेयर सुरु नहुँदासम्म बाइक र ग्याजेट्स चाहिन्न। नयाँ नेपालका किशोरी र युवतीका हरेक कुरामा आफ्नै च्वाइस छ। कस्ता केटाहरू चढ्छन् त उनीहरूका नजरमा? सजना बरालको खोजीनिती विवरण :
Thursday, 14 June 2012 17:43	नागरिक
कुनै बेला नेपाली फिल्मकी नायिका बन्ने ठूलो अभिलाषा थियो, दीपाश्री निरौलाको। डेढ दर्जन फिल्ममा अभिनय गरिसकेपछि ठूलो पर्दा आफ्नो लागि होइन भन्ने भेउ पाइन् उनले। रंगमञ्चबाट टेलिभिजनको सानो पर्दा हुँदै ठूलो पर्दामा पुगेर जम्न नसकेपछि उनी अहिले सानो पर्दामै रमाएकी छिन्।
किन आत्महत्या गरेकी जेसिका?
Thursday, 14 June 2012 17:37	नागरिक
(25 votes, average 2.32 out of 5)
किशोर नेपाल- कान्तिपुर शहरको गौरव मानिने धरहराको बाटोबाट सुन्धारातिर चियाउँदा जेसिकाको अनुहारले पछ्यायो विनितालाई। उसले सोची, 'आखिर आत्महत्या पनि एकप्रकारको महत्वाकांक्षा नै त हो। महत्वाकांक्षी मानिसले मात्रै गर्नसक्छ आत्महत्या।' विनिता सयौँ पटक मरिसकेकी थिई अभिनयमा। जेसिका एकैपटक मरी। जीवनलाई जसले बढी सुमसुम्याउँछ र जसले बढी माया गर्छ, त्यसैले गर्छ आत्महत्या। शरीर हो, आत्महत्याको कारण।
के हो त यो भल्गर ?
Thursday, 07 June 2012 15:16	नागरिक
(15 votes, average 3.93 out of 5)
कुनै समय यस्तो पनि थियो, जब महिलाले लगाएको फरियाबाट उनका मोटा पिँडुला देखिँदा मानिसहरू जिब्रो टोक्थे। सबैको प्रतिक्रिया हुन्थ्यो, 'लौ, यो त सकिइछ।' आज परिस्थिति बदलिएको छ। पुरानो चलनअनुसारको पहिरन भल्गर देखिन थालेको छ। पिँडुला होइन, तिघ्रा नदेखाएसम्म केटीहरूको चित्त बुझ्दैन। 'भल्गर' यस्तो गतिशील शब्द हो, जसको वेगमा अहिलेको पूरै संसार बगेको छ।
कहिल्यै बुढी हुन्नँ म
Thursday, 07 June 2012 15:11	नागरिक
पोखरामा निकै संघर्ष गरेर स्थापित भएकी मोडल हुन्, रेखा पुरी। उनले १४ वर्षको कलिलो उमेरमै ग्ल्यामर दुनियाँमा पाइला टेकेकी थिइन्। पोखराको चर्चित मोडलमात्र उनको परिचय होइन। उनी स्थानीय टेलिभिजन 'गोल्डेन टिभी'मा भिजे पनि छिन्। नेपालको प्रकृतिक राजधानी पोखराको स्पन्दन लेकसाइडमा टहलिँदै गर्दा भेटिएकी रेखासँग स्वरूप आचार्यले गरेको अन्तरंग कुराकानी :
यसो गरे कसो होला?
Thursday, 07 June 2012 15:08	नागरिक
किशोर नेपाल- टेलिभिजनका च्यानल सर्फिङ गर्दै जाँदा च्याम्सीका आँखा टक्क अडिए, एउटा कार्यक्रमको प्रोमोमा। एकजना कान्तिपुर शहरको स्वादको वर्णन गरिरहेको थियो। शहरका स्वादहरू बढाउन नुन-खुर्सानीमा अदुवा थप्ने, तातेको तेलमा लसुन फुराउने, भैँसीको मासुमा खसीको गिदी मिसाउने...च्याम्सी प्रोमो देखेर मरी-मरी हाँस्न थाली। यसो गरे कसो होला?
जति कष्ट, त्यति मोज
एकल महिलालाई हेर्ने नजरै गलत : गायिका अञ्जु पन्त